Säpo oo diwaangelinaysa dadka taageera ururada argagaxisada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Säpo oo diwaangelinaysa dadka taageera ururada argagaxisada
La daabacay torsdag 9 juni 2016 kl 10.08
Ka hor taga argagaxisada
Säpo utreder misstänkt terrorhot riktat mot Stockholm sawir: Tomas Oneborg/SvD/TT
Ciidamada sirdoonka Iswiidhan, säpo, ayaa doonaysa in ay diwaangeliso dadka internetka ku taageera ururada argagaxisada.
Arrinkan ayey heeyada Datainspektionen hadda baadhaysa in ay macquul tahay marka loo eego sharciga waddanka u yaala.
Dhowr cilmibaadhe ayaa diwaangelintan u arka sharci- darro, madama uu saameeyn karo dadweynaha aan dembiga gelin oo la daba geli doono.
-Ciidamada sirdoonka ayaan hubin in uu hindisahani macquul yahay marka loo eego sharciga waddanka u yaala, sidaas daraadeed ayey doonayaan in aanu arrinkan hadda baadhno, ayey sheegtay Cecilia Agnehall oo ka hawlgasha heeyada Datainspektionen.
Dawladda ayaa cidaamada sirdoonka lacag gaadhaysa hal bilyan ku maalgelisay si ay uga hor tagaan argagaxisada, boqolkii ba 34 lacagtan ayey heeyadani isticmaashay sannadkii hore , halkey sannadkii ka horeeyay, 2014, isticmaashay boqlkii ba 28 keliya.
300. Waa tirada ay cidaamada sirdoonku aaminsantahay in ay waddanka ka baxeen si ay ula garab dagaalamaan ururka argagaxisada ee Daacesh. Sidaas daraadeed ayey heeyadani hadda ku talo jirtaa in ay daba gasho dadka internetka ku taageera amba fikirka Daacesh aaminsan. Tusaalahan ayey dhowr bilood ka hor codsatay in la siiyo ogolaasho si ay uga qeeyb qaatan saldhiga kombiyuuterka ee heeyada socdaalka.